C/raxmaan Cirro oo qal-qaalo ugu jiro sidii ay ku midoobi lahaayeen Soomaaliya iyo Somaliland – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/raxmaan Cirro oo qal-qaalo ugu jiro sidii ay ku midoobi lahaayeen Soomaaliya iyo Somaliland
Guddoomiyaha golaha wakiiladda ee maamulka Somaliland ahna hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Waddani C/raxmaan C/laahi Maxamed “Ciro” ayaa qal-qaalo ugu jira sidii ay Soomaaliya iyo Somaliland ku midoobi lahaayeen, isagoona dhawaan shaaciyay in Somaliland ay la midoobi doonaan Soomaaliya inteeda kale.
Mr. Cirro oo Hoteelka Sarena ee magaalada Nairobi kulan kula yeeshay ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaaalka Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke iyo wafdi ka socda maamulka Somaliland ayaa shaaciyay in lagama maarmaan ay tahay in Soomaaliya iyo Somaliland ay midoobaan.
C/raxmaan Cirro ayaa sidoo kale la sheegayaa in magaalada Nairobi uu maalintii Arbacada ahayd kulan kula qaatay wakiiladda dowladdaha Britian, Denmark, Faransiiska, Jarmalka iyo Midowga Europe (EU), isagoona madaxdaasi usoo bandhigay arrinka ku saabsan midowga Soomaaliya iyo Somaliland.
“Waxaan doonaynaa inay beesha caalamka naga taageeraan dalkeebaa sidii ay doorasho xur ah uga dhici lahayd ugu hufan” Ayuu yiri C/raxmaan Cirro.
Dhinaca kale, madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud “Silaanyo” oo xilkaasi soo qabtay laga soo bilaabo bishii June 26-dii ee sanadkii 2010-kii ayaa ku dhawaaqay inuusan doonayn inuu mar kale isku soo sharaxo xilkaasi.
Waxaa xilka madaxweynaha maamulka Somaliland sanadkaan u sharxan guddoomiyaha xisbiga Kulmiye ee haatan taladda maamulkaasi haaya Muuse Biixi Yoonis iyo musharixiinta kale ee xisbiyada mucaaradka ah.
Somaliland oo inta badan sheegata inay xuriyad heleen sanadkii 1991-kii kadib burburkii dowladdii militeriga ahayd ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre ayaan weli helin wax aqoonsi ah, balse loo aqoonsan yahay oo kaliya inay tahay maamul goboleed ka tirsan Soomaaliya oo hoos-tagta dowladda federaalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, deegaanada Somaliland ayaa la filayaa in doorashada guud ee maamulkaasi ay ka bilawdaan bisha March 27-keeda ee sanadka soo socda 2017-ka, waxaana dhowr bilood kahor xilligaasi dalka Soomaaliya ka dhici doono doorashadda madaxweynaha Soomaaliya ee dhowr jeer hore dib u dhac ku yimid.